Wonke umuntu ufuna ukuba uqiniseke ukuphepha impahla yabo. Nokho, ngesikhathi lapho abanikazi sokushiya ikhaya labo isikhathi eside, inani ukugqekeza kukhuphuke kakhulu ngokusho izibalo. Lokhu kwenzeka ngesikhathi samaholideyi nezikhathi iholide. Ngakho-ke, labo abafisa uphumule ekhaya, kuyinto ephathelene nokulandelayo mayelana umbuzo nokuvikelwa kwempahla.
Ngeshwa, kusukela umgqekezi akakwazi ukuvikela ngokuphelele noma eziyinkimbinkimbi uhlelo izingidi noma yensimbi iminyango. amasela Professional naphula kunoma iyiphi indawo, ngisho noma endaweni yokuhlala lapho likhona, usebenza inkonzo zayo zezokuvikela.
Pho-ke, ukuvikela impahla yabo kusukela ukweba? Ukuze uxazulule le nkinga kuyosiza UAB "izinhlelo Gulfstream zokuphepha." Le nkampani yasungulwa ngo-1994 Namuhla kuba uhlelo esebenza ubusuku nemini. Its usebenze kahle futhi nje.
Ngaphambi kokuya endlini umnikazi ubeka indlu yayo phezu alamu. Uma uzama ukungena ngumfokazi egumbini ngesikhathi akude ukuqapha esiteshini ngokushesha ingena i-alamu.
Le nkampani "Gulfstream Security Systems" izibuyekezo ezivela kumakhasimende abo ukuthola ubuhle bodwa kuyo. Ngemva kokuthola lo alamu emva kwemizuzu emihlanu kuphela eziyisikhombisa endaweni kufike abasebenzi, amalungu Rapid Response Team. I subscription Imali, okuyinto ikhasimende okhokhela, kuhlanganise hhayi kuphela ukuqapha iwashi, kodwa futhi noma iyiphi inombolo ukuvakashelwa saleli abasebenzi.
Le nkampani "Gulfstream Security Systems" impendulo wathola hhayi kuphela njengoba inhlangano anikezelwe kokuvula zokuqapha umnyango. Ngu amadivayisi ezikhethekile, okuzokwenza ukuhlonza ukuvuza kwamanzi kanye negesi, nangomusi, nangesibabule, trace ngokusebenzisa Ukungena ku balcony izindlu namawindi angase afakwe.
Le nkampani "Gulfstream Security Systems" uhlamvu omuhle uthola impendulo ukusuka abantu nje kuphela kodwa futhi izinhlangano kwezohwebo. Uhlelo opharetha Ukuvikelwa iphaneli okwamanje esikhulu kunazo zonke eRussia, ukuhlinzeka amasevisi ayo ukuqinisekisa ukulondeka ingcebo emaphandleni, ezindlini kanye ehhovisi izakhiwo kanye namabhizinisi.
Usizo olunikezwa nkampani "Gulfstream Security Systems"
Izibuyekezo amaklayenti eziningi ngubani abaphathiswe impahla yakhe opharetha ukuze ukhombise nokwethenjelwa lula ukusetshenziswa wonke amadivaysi efakwe kuwo. Bakhangwa abanikazi ingcebo futhi ongakhetha lenkampani. Ngakho, ukuphathwa kwezokuphepha engenziwa nge ukungena kokukude nge-Internet. Le nkampani iye yasungula futhi isithembiso esikhethekile amakhasimende ayo - "yemilindankosi mobile". It kuzovumela opharetha ukuthumela "isignali Gulf Stream» SOS.
Security izinhlelo "Gulf Stream", abagcini nokuvikeleka kwempahla, zenzelwe ngokuvumelana nezindlela yokukhiqiza esimanjemanje kakhulu. Kufakiwe imishini elihlangabezana nazo zonke izidingo zobuchwepheshe. Ukusebenzisa engenawaya izimiso zesiphuphutheki ukulawula okusekelwe ubuchwepheshe GPS kanye GSM-navigation.
Idolobha lapho kutholakala khona inkampani isebenza "Gulfstream Security Systems" - eMoscow Volgograd, Petersburg Tyumen neKazan. Imisebenzi opharetha ngobukhulu osebenza ku nezinye izifunda eziningi zaseRussia.